Portiogaly: Bilaogera Mpikatroka Nampanginin’ny Google · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Novambra 2012 10:15 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, Español, Ελληνικά, English
Notampenam-bava ny bilaogin'ny vondrona Precários Inflexíveis tamin'ny 14 Novambra, nandritra ny andron'ny fitokonana faobe tao amin'ny firenena ary indrindra fotoana mahabe mpamaky ny pejiny. An'arivony ireo olona niandry sy nitady vaovao momba ny fihetsiketsehana ary naharay ity hafatra ity ny tao amin'ny bilaogin'ny vondrona “Manitsakitsaka ny fepetra fampiasana ny Blogger ity bilaogy ity ka ireo tompony ihany no mahazo miditra amin'ny bilaogy”.
Ny tanjon'ny bilaogy Precários Inflexiveis dia ny mampahafantatra sy manameloka ny fepetra “mafy, ratsy ary kely karama” momba ny asa iainan'ireo mpiasa ankehitriny, izay maro amin'izy ireo no tsy mba afaka mahazo fifanekena arak'asa maharitra ela. Mitovy amin'ny mpiasa-tanana “miasa mafy, fepetra ratsy sy kely karama” ny anarana omena azy ireo. Amin'ireo tanora 40% tsy an'asa, tratran'ny fandrahonana ny zon'ireo izay mba afaka mahita karama.
Tamin'ny 14 Novambra, afaka nibilaogy tao amin'ny pejy Facebook-ny ny Precários Inflexíveis, ary nanoratra fa niteraka fanafoanana ny bilaogy ny fiampangana manala-baraka nataon'ny Google. Ny orinasa Vondrona BF, izay nitaraina tamin'ny Google no mety nahatonga izao noho ny fijoroana vavolombelona nataonà mpiasa iray izay niampanga ity orinasa ity ho manao “asa tsy ara-dalàna sy tsy mandoa hetra”. Nisy ihany koa ireo fitarainana sasany mahakasika ny orinasa Vondrona BF izay nalefa tamin'ny habaka hafa , tahaka ny habaka ao Portiogaly antsoina hoe “Queixas” (midika hoe fitarainana)..
Tamina resadresaka niarahana tamin'ny gazety Portiogey mpivoaka isan'andro Público, nanambara ny Precários Inflexíveis fa efa niakatra fitsarana izy ireo noho ny fitoriana nataonà orinasa hafa, mitovy tahaka izany ihany koa ny anton'ny fitoriana. Resy ny Precários Inflexíveis tamin'ny fitsarana ambaratonga voalohany saingy nandresy kosa izy tamin'ny fampiakarana ny raharaha teny amin'ny ambaratonga faharoa. Nihevitra ny vondrona (Precários Inflexíveis) fa mahatonga ireo orinasa hafa hanita-kevitra izao raharaham-pitsarana izao.
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, tao amin'ireo firenena somary miavaka, efa nanomboka nanaisotra ireo votoaty ao amin'ny Blogger i Google ho fampiharana ny fepetra vaovao momba ny fampiasana ny tranonkala .
Nilaza ireo vondrona mpikatroka Portiogey fa hanery ny Google izy ireo mba hamerenana indray ny bilaogy ary hanohy hilaza sy hiampanga izay rehetra fepetra mafy sy ratsy momba ny asa .